संसदीय सर्वोच्चता होइन, संवैधानिक सर्वोच्चता : काँग्रेस नेता कृष्ण सिटौला | Ratopati
संसदीय सर्वोच्चता होइन, संवैधानिक सर्वोच्चता : काँग्रेस नेता कृष्ण सिटौला
personफणिन्द्र नेपाल exploreकाठमाडौं access_timeसाउन २५, २०७५ chat_bubble_outline0
कुनैबेला नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका र राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा समेत पुगेका काँग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाहाल त्यति चर्चामा छैैनन् । काँग्रेसको महामन्त्री र गृहमन्त्री समेत भइसकेका सिटौला निर्वाचनपछि प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको काँग्रेसको पुनर्संचनामा जुटेको बताउँछन् । अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन हुनुमा तत्कालीन १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतालाई उपलब्धिमूलक ठान्ने सिटौला पछिल्लो समय राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले राजनीतिक मूल्य र मान्यता छोड्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।
शीर्ष नेताहरू आत्मकेन्द्रित र स्वार्थकेन्द्रित बन्दै जाँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र सङ्घीयता जनताले रोजेको व्यवस्था भए पनि त्यो अनुसार प्रतिफल पाउन नसेको सिटौलाको निष्कर्ष छ । प्रस्तुत छ यिनै समसामयिक विषयमा रातोपाटीका लागि फणिन्द्र नेपालले नेता सिटौलासँग गरेको कुराकानी :
देशमा शान्ति अमनचयन कायम गर्न र लोकतन्त्र ल्याउन त्यो सहमति सफल भएको छ । प्रमुख आधार नै त्यही हो । त्यसयताको राजनीतिक विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्वले सही ढङ्गले काम गर्न सकेको छैन । यसमा एउटा दल विशेषको नेतालाई मात्रै पनि दोष दिनुहँुदैन । सबै राजनीतिक दलका नेताले यसमा जिम्मा लिनुपर्छ । नेपलाको राजनीतिक व्यवस्थामा जो नेतृत्वमा पुगे पनि खासगरी सरकार सञ्चालनका लागि आफ्नो पृष्ठभूमि र इतिहासलाई बिर्सने, समयको मागलाई बेवास्ता गर्ने, जनताको चेतनाको उचाइलाई थिच्न खोज्ने मनोवृत्ति हाबी छ । आदर्शबाट च्यूत भएपछि सबै कुरा विखण्डित हुन्छन् । आजको समाज परस्पर विश्वास र एकताको समाज बनाउनुपर्छ । जनताको भावनालाई एकीकृत गरेर सामूहिक प्रगति हुनुपर्छ । गरिब र निमुखाका लागि हामीले लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेका छाँै, त्यो कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक अधिकार र आर्थिक प्रगतिलाई साथसाथै लैजान सक्नुपर्छ । संविधान बनाएको तीन वर्षभित्र मौलिक अधिकारका रूपमा राखिएका विषयहरूलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर यो काममा यो सरकारले ठोस प्रगतिउन्मुख काम गरेको छैन । यही असोज ३ गते तीन वर्ष पुग्छ संविधान जारी भएको । १२ बुँदेपछि संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा केही ढिलाइ भए पनि आफ्नो संविधान जनता आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत बनाएका छन् । त्यो ठूलो उपलब्धि हो । यसबाट नेपाली जनता सार्वभौम छन् भन्ने प्रमाणित गर्छ । अब जनताको प्रतिनिधि सर्वोच्च संस्था पार्लियामेन्ट र त्यो पार्लियामेन्टले बनाएको सरकार संविधानप्रति र जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ । फराकिलो छाती राखेर काम गर्नसक्नुपर्छ, यहीँ छ समस्या । त्यसका लागि राजनीतिक दलको नेतृत्व स्वार्थबाट माथि उठ्न जरुरी भइसकेको छ । जनताको जीवनमा नयाँ र प्रगतिको परिवर्तन आउन सकेन भने अहिलेका राजनीतिक दलहरू पनि विस्तारै निरर्थक हुन्छन् । त्यसकारण राजनीतिक दलले आत्मसमीक्ष गर्न जरुरी छ । शुद्धीकरण गर्न बेला हो यो । राष्ट्रका खातिर जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने बेला हो । आफ्नो निजी र आफ्नो पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने बेला हो तर राजनीतिक नेतृत्वमा नदेखिनु दुखद कुरा हो ।
जनताले राजनीतिक अधिकार पाए । त्यो नै ठूलो उपलब्धि हो । राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गरेर आफ्ना प्रतिनिधि छानेका छन् । यसरी छानिएका प्रतिनिधिले जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्छ । यसमा अहिलेको यो ६ महिना वर्ष दिनको मात्रै मूल्याङ्कन गरेर गर्न सकेनन् भनिहाल्नु हुँदैन । व्यवस्था जनताको पक्षमा आएको छ । यो व्यवस्थाभित्रबाट सत्ता र शक्तिमा पुग्नेहरूले सदुपयोग गर्नुपर्छ । सरकार बनेको सुरुवातामा जसरी घटनाक्रमहरू विकसित भए, जस्तो बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तिनबाट राम्रो सुरुवात भने देखिएको छैन । सरकार पेलेर हिँड्ने मनस्थितिमा देखियो । यति शक्तिशाली सरकारको व्यवहार शक्तिको न्यून प्रयोगबाट हुनुपर्छ । दम्भ, अहंकाररहित र स्थिर हुनुपर्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था त जनताका लागि ल्याएको हो नि । तर यो सरकारले ल्याएको व्यवस्थाअनुसार कर प्रणाली हेर्ने हो भने आत्तिने अवस्था छ । सरकारले दिने सुत्केरी भत्ताभन्दा बढी जन्मदर्ता गर्दा तिर्नुपर्छ । चाहे अन्तशुल्क बढोस, चाहे कर बढोस् त्यसको भार त जनताले भोग्नुपरेको छ नि । यति धेरै महँगी बढ्यो तर जनताको क्रयशक्ति बढेको छैन । मूल्यवृद्धि थेग्न नसक्ने अवस्थामा छ । व्यवस्था जनताको पक्षमा तर सरकार जनताको विपक्षमा जस्तो देखिन्छ । यसरी अतालिनुपर्ने कारण के हो ? त्यसकारण सरकार आफै डराए र हल्लिएजस्तो लाग्छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणकै कुरा गरौँ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभयो । प्रस्तावित नाम सुनुवाइ समितिमा गयो । सुनुवाइ समितिले सङ्ख्याका आधारमा नाम अस्वीकृत गर्यो । दीपकराज जोशीलगायत जोजो छन्, उनीहरू सबै सुनुवाइ पार गरेर पुग्नुभएको हो । उहाँहरू सर्वोच्चमा स्थायी भएर तीन वर्षसम्म काम गर्दा कही कतैबाट प्रश्न उठेन । अनि प्रधानन्यायाधीशमा चाहिँ एकाएक अस्वीकृत हुने ? सुनुवाइसम्बन्धी कानुन नबन्दै बहुमतका आधारमा रिजेक्ट गर्ने ? यसले के देखिन्छ भने हाम्रो दुईतिहाई छ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले हामीले भनेको गर्नैपर्छ भन्ने बुझिन्छ । संविधानले अदालत स्वतन्त्र र निस्पक्ष कल्पना भनेर गरेको छ । संसदले बनाएका कानुनहरू पनि अदालतमा परीक्षण हुन्छन् । त्यसैले यहाँ संसदीय सर्वोच्चता होइन, संवैधानिक सर्वोच्चता हो । संसदको, सरकारको र सर्वोच्चको आ–आफनै कार्यक्षेत्र छ्न् । सरकारले हामीसँग दुई तिहाई छ । हामीले भनेको न्यायाधीशहरूले मान्नुपर्छ, मानेनाँै भने दुई तिहाइको डण्डा लगाउँछु भन्ने मान्यता गलत छ । जसले संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई प्रहार गरेको छ ।
सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पनि गलत थियो । हामीले जे गर्यौँ, त्यो ठीक भन्ने पक्षमा म छैन । हाम्रो नेतृत्वले सुशीला कार्कीका लागि महाअभियोगको प्रस्ताव लैजाँदा जसरी लग्यो र त्यो किनारा लागेन । किनारा नलाग्नु भनेको अनुत्तरित हुनु हो । तर अब फेरि त्यसबेला काँग्रेसले गल्ती गरेको थियो अनि अहिलेको सरकारले पनि गल्ती गर्नुपर्छ भन्ने होइन । हिजोका शासक वा अहिलेका शासक जोसुकै होस्, हिजो गल्ती गरेको थियो भनेर अहिले पनि गल्ती दोहोरिन दिनुहुँदैन, त्यो गर्न पाइँदैन । त्यसकारण आजको प्रसङ्गमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ पार गरेर स्थायी न्यायाधीश भएर तीन वर्ष पार गरेको र त्योबीचमा कुनै प्रश्न नउठाउने तर अहिले प्रधानन्यायाधीश बन्ने बेलामा एकाएक प्रश्न उठाउनु गलत छ, त्यो पनि सुनुवाइ ऐन नै नल्याई । सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष दोषरहित भएर कुनै न्यायाधीशले कार्यसम्पादन गर्छ भने ऊ स्वतः प्रधानन्यायाधीशको दाबेदार हुन्छ । त्यसकारण संवैधानिक परिषद्ले कानुनअनुसार छानविन गरेर ल्यासकेपछि कुनै प्रश्न उठ्छ भने न्यायिक छानविन समिति गठन गरेर जान सकिन्थ्यो, त्यो गरिएन । संविधानबमोजिम किन ऐन कानुन बन्दैन ? त्यसमा त डिटेल आउँदो हो । कस्तोकस्तो प्रश्नमा के–के गर्न सकिने भन्ने खुलाइँदो हो । त्यसो नगरी अनुपयुक्त ठहर गर्नु उचित भएन । हामीले संविधानमा कल्पना गरेको न्यायपालिका स्वतन्त्र र निस्पक्ष रहनेछ भन्ने हो । त्यसैले न्यायापालिका लगायत अन्य संवैधानिक अङ्गलाई दुई तिहाइको डण्डा देखाइयो भने संविधान निरर्थक र कागजको खोस्टो बन्छ । तर हामी संविधानलाई कागजको खोस्टो बन्न दिदैनौँ । जुन प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा जे–जस्तो निर्णय भएको छ, यसले आज सत्तामा बस्नेलाई न्यानो होला तर यिनै सत्तामा बस्नेलाई भोलि अन्याय पर्न सक्छ । यसरी सरकार हिँडिरह्यो भने देश दुर्घटनामा पर्छ । देशको राजनीति दुर्घटनामा पर्छ ।
पार्टीले निर्णय गरेर मलाई कुनै भूमिका त दिएको छैन । तर आफ्नो तर्फबाट निभाउनुपर्ने भूमिका निभाइरहेको छु । नेपालमा आएको परिवर्तनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेस आफैमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर लागिरहेको छु । पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छु । नेपाली काँग्रेसलाई विधि, प्रक्रिया र मान्यतामा हिँडाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ । पार्टीलाई समयको मागअनुसार परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसका लागि काँग्रेसको तलदेखि माथिसम्म पुुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म आफैले जिम्मेवारीबोध गरेको छु । वैचारिक र राष्ट्रिय जागरण जनताकै माझबाट खोज्नुपर्छ, त्यो विचार बोक्नुपर्छ । अर्को हामी प्रतिपक्षमा रहेर पनि देश विकास र समृद्धिका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ भनेर आफ्ना योजना बनाउनुपर्छ ।
कम्युनिस्टलाई लोकतन्त्रमा ल्याउने काम गरेकामा मलाई कुनै पछुतो र आत्मग्लानि छैन । अहिलेसम्म शान्ति र लोकतन्त्रका लागि मैले गरेको भूमिकाप्रति म सन्तुष्ट छु ।